Warsan Shire waa gabar Soomaaliyeed oo heeso u qortay Beyonce. - iftineducation.com
Warsan Shire waa gabar Soomaaliyeed oo heeso u qortay Beyonce.
aadan21 / October 21, 2016
iftineducation.com – Warsan Shire oo ah gabar gabyaa Soomaaliyeed oo dalka Ingiriiska ku nool ayaa u waxey noqotay abwaanada u suurto galisay fanaaanada Mareykanka ee Beyonce qaar ka mid heesaha albumka Lemonade kaas oo caan ka noqday dunida haatan.
Warsan Shire ayaa ah gabyaa afmaal ah oo u dhaqdhaqaaaqda xuquuqda dumarka iyo dadka laga tiro badan yahay waxaana ay erayada ay qortay ay soo jiiten fanaanadan oo u xulatay in ay qeyb noqdaan albumbaasi.
Waxaa albumkaani uu yahay mid wata erayo kacdoon ah oo lagu guubaabinayo dadka madoow ee dhibaatada ka haysato in ay xuquuqda sinaanta ka helaan meelo badan oo caalamka ka mid ah sida Mareykanka.
Soomaalida oo xaan ku ah gabayga iyo tirinta tixda ayaa markaan waxaa la arkayaa in jiilka soo koraya uu u gudbay dhaxalka awooweyaasheen maadaama ay Warsan Shire iyadoo ingiriis ku qorta suugaanta ay haddana caan baxday.
Halkaan hoose ka daawo albumka Lemonade heestiisa rasmiga ah.
Habka ugu haboon ee aad u kasban karto qalbiga lamaanahaaga
Chris Brown oo xabsiga la dhigay markale